चिया पिउनुहुन्छ ? एक दिनमा कति चिया पिउने ? एक पटक अवस्य पढ्नुहोस – Annapurna Daily
On Sep 27, 2021 1,343
धेरैको घरमा एकै तरिकाले चिया बनाइन्छ । पानी, दुध, चीनी, चियापत्ती हालेर उमालिन्छ । केही मसला हाल्नुछ भने उम्लिएको केही समयपछि हालिन्छ र एकछिन पुन: उ’मालिन्छ । तर यो विधीलाई गलत मानिन्छ । त्यसो भए चिया बनाउने सही तरिका के हो । दिनमा कति कप चिया पिउने वा खाली पेटमा चिया पिउनु हुन्छ, हुँदैन भन्नेबारे यहाँ जानकारी दिइएको छ ।